Nugaal oo 4-3 kaga badisay Hiiraan, iyo J. Hoose oo ku barbaratay Galgaduud (3-1). – Radio Daljir
Nugaal oo 4-3 kaga badisay Hiiraan, iyo J. Hoose oo ku barbaratay Galgaduud (3-1).
Diseembar 22, 2010 12:00 b 0
Garowe, Dec 22 – Ciyaaro xiiso badan ayaa galabta lagu ciyaaray garoonka kubadda cagta ee Mire Awaare, Garowe. Hadii aan ku horeyno Group D, ciyaar ay wada ciyaareen xulalka gobolada Galgaduud v Jubada Hoose waxaa ay ahayd ciyaar qabow aan aan si aad ah u kululayn, waxaana qeybtii hore ee ciyaarta gool ku hormartay J. Hoose.
J. Hoose v Galgaduud
Inkasta oo labada dhinac ciyaartoodu ay si uun u qaboobayd, hada xulka gobolka J. Hoose waxaa uu ciyaarayay ciyaar dar dar leh oo uu goolal badan ku raadinayay; ciyaartu markii ah qeybtii hore dhexda mareyso ayay gool 2-aad dhaliyeen, hase yeeshee xulka Galgaduud ayaa iyaguna waxaa ay heleen qeybtii hore ee ciyaarta gool; waxaana qaybta hore ee ciyaarta lagu kala nastay 2-1 oo J. Hoose ay leedahay.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa laysugu soo laabtay, waxse iskama bedalin qaabkii hore ee labada xul ay kuwada ciyaarayeen. Sidoo kale waxaa ay sameeyeen isbedalo dhinaca ciyaartoyda ah, inkastoo taasina xitaa aan waxba ka badalin ciyaarta.
Si kastaba ha ahaatee, qaybtii labaad ee ciyaarta markii ay wax yar ka dhimantahay ayay xulka gobolka J. Hoose heleen goolkii 3-aad, waxayna ciyaartu ay ku soo gabagabowday 3-1, taasi oo hogaanka Group D ay ku qabatay, waxayna ku hor kacaysaa 4 dhibcood.
Nugaal v Hiiraan
Ciyaar xiiso badnayd oo la wada dhawrayay ayaa dhanka kale waxaa wada yeeshay xulalka gobolada Hiiraan v Nugaal ee Group A. Labadan xul waxaa ay u soo gudbeen wareega 2-aad ee 8-da gobol, inkasta oo ciyaarta galabta ay u kala tartamayeen A iyo B ama kaalinta 1-aad iyo kaalinta 2-aad.
Ciyaartan ayaa waxaa ay ka xiiso badnayd ciyaartii ka horeysay, waxaana labada xul ay soo bandhigeen xirfado iyo farsamo aad u sareeya taasoo xiiso galisay dadkii u soo daawasho tagay, waxaana labada taageero ay dhiiro galinayeen labada dhinac.
Qeybtii hore ee ciyaartan ayaa waxaa ay ku bilaabatay dar dar xoogan, waxaana goolk qurux badan ku hormartay Xulka gobolka Hiiraan; taasi waxaa xigtay in xulka gobolka Nugaal ay ka jawaabto arrinkaasi iyadoo la timid gool barbardhac ah iyo mid kale oo xigay; waxayna ciyaarta qeybtii hore ku soo dhamaatay 2-1 oo ay xulka Nugaal ay ku hor kacayso ciyaarta.
Xulka Hiiraan ayaa waxaa loo diray shaqo, waxaana qeybtii labaad ee ciyaarta laga dhaliyay gool 3-aad, haseyeeshee Nugaal iyana waxaa fuulay culeys xoogan oo kaga imaanay ciyaaryahanada weerarka uga Cciyaari xulka gobolka Hiiraan, taasoo u sahashay Hiiraan in ay heleen goolkii 3-aad, waxayna ciyaartu noqotay 3-3 oo barbardhac ah, walow fursad qurux badan oo ay heleen xulka Nugaal, gool aad qurux badanna ay ku keensadeen, waxayna ciyaarta ku soo dhamaatay 4-3 oo ay Nugaal ku adkaatay, inkastoo la dhihi karo Hiiraan waxaa ay soo bandhigtay ciyaar aad u qurux iyo xirfad badan.
Isku soo wada duuboo, Nugaal ayaa hada Groupkan A kaalinta 1-aad ka gashay, halka Hiiraan ay noqoy 2-aad, waxayna ku kala aadayaan Groupka B, kaalinta 1-aad iyo midda 2-aad, hadii aan si kale u dhigno Nugaal waxay ay ku aadaysaa Groupka B kaalinta 2aad halka Hiiraanna ay ku aadayso Groupka B, kaalinta 1-aad.
Dhanka kale, Berri waxaa wada ciyaarayo Groupka B, waxayna isu arkayaan sida tan:
– Mudug v Sool
– Banaadir v Gedo
Salmaan Jamaal Siciid (Kaka)
Mudug & Banaadir oo u gudbay wareega 2-aad – Halkan ka dhegaysto baahinta ciyaarta ee idaacada Daljir – Jamal Kaka & Baydhabo oo ku sugan garoonka kubadda cagta ee Mire Awaare.
Warbixin ku saabsan ciyaarihii shalay, maanta, sida ciyaaruhu ay u socdaan & dhibcaha ay kala leeyihiin xulalka gobolladu.